Ny lalao Final Fantasy tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny iray amin'ireo franchise malaza indrindra amin'ny lalao dia, tsy isalasalana, ny andiany Final Fantasy. Hatramin'ny taona XNUMX, lalao am-polony maro teo ambanin'ny elo Final Fantasy no nahatratra ny console sy ny solosaina voalohany, ary ny smartphone sy ny takelaka taty aoriana. Ary mazava ho azy, androany ny panorama dia manaraka ny gadona mitovy.
Araka ny efa nolazainay, maro amin'ireo lalao amin'ny franchise Final Fantasy no efa misy. for finday fitaovana Noho izany, raha tena mpankafy an'ity saga ity ianao na tsotra, miditra amin'ity sokajy lalao ity ianao, anio dia hasehonay anao ny sasany amin'ireo tsara indrindra hahafahanao miala voly tanteraka mandritra ireo andro tetezana ireo.
4 Farany Fantasy farany
Nanomboka ny safidinay tamin'ny lohateny «Final Fantasy Brave Exvius», izany hoe iray amin'ireo lalao finday malaza indrindra amin'ny andiany Final Fantasy. Ny tantara dia mihodina amin'ireo maherifo roa izay manandrana mamonjy ireo kristaly sy fahitana miafina ao anatiny. Azonao atao ny mamoha ny endri-tsoratra isan-karazany amin'ny lalao hafa ao amin'ny saga mba hanampiana anao amin'ny fikarohana.
Mampiavaka ny lalao ambaratonga sarotra maro, ady, fahaiza-manao taktika, hetsika majika, hetsika, tranomaizina sy tanàna izay tsy maintsy jerenao hahitanao ireo zavatra sy làlana miafina hahafahanao mahatratra ny toerana halehanao manaraka sy ny maro hafa. Nozaraina araka ny tokony ho izy freemium noho izany dia tokony hiditra amin'ny fividianana fampiharana ianao raha te hanatsara ny fiainanao amin'ny lalao.
Final Fantasy EXVIUS BE HERIM-PO
"Mobius Final Fantasy" dia a lohateny tsy manam-paharoa ao anatin'ity andiana lalao Final Fantasy ity. Ny antony tsy manaraka ny mekanika ady mahazatra na ny fomba fanaovana tantara avy amin'ny andiany lehibe na ny lalao freemium Final Fantasy hafa. Na eo aza izany dia manana singa mitovy aminy ihany izy. Ahitana maherifo iray hita ao amin'ny tontolo potika ity tantara ity ary asany ny maha-maherifo azy amin'ny famahana ny zava-drehetra. Ny lalao, ary ny habaka, dia voafetra amin'ity indray mitoraka ity saingy mbola, io no iray amin'ireo tsara indrindra.
Tsara be izany Sary 3D, fampielezan-kevitra sy hetsika manokana, safidin'ny fanaingoana tsy tambo isaina, asa ary fahaiza-manao ho anao hametraka ny fitsapana ny fahaizanao tetika sy hahombiazana ary maro hafa.
Toy ny teo aloha, dia lalao freemium izay misy fividianana ao anaty rindrambaiko.
Miaraka amin'ny «Final Fantasy Record Keeper» dia ho afaka Mampiasà mpilalao amin'ny lalao Final Fantasy isan-karazany. Ary raha vantany vao vitanao izany dia azonao atao ny mamerina ny sarin'ireo lalao tranainy indrindra. Mazava ho azy, tsy maintsy manao famerenana tantara ianao raha te ho azo antoka fa hitranga araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra.
Amin'ny ankapobeny dia ny fahafahanao mamelona indray ny fotoana tianao amin'ny Fantasy tianao indrindra, fa izy ireo koa dia mitondra ny sento anao tany am-boalohany. Ankafizo ny rafitra Continuous Time Battle (BTC), mamorona vondrona manokana anao ary tariho ho amin'ny voninahitry ny fandresena amin'ny ady.
Toy ny ambiny, dia lalao freemium izay misy ny fividianana amin'ny fampiharana.
FINAL FANTASY Mpitahiry Record
Developer: Ny orinasa DeNA Corp.
Farany Fantasy farany
Raha hifindra amin'ny lasa isika dia hahita "Final Fantasy Dimensions", izay iray amin'ireo lalao voalohany amin'ity andiany ity hisehoana ho an'ny finday. Araka izany, manolotra singa marobe izay nanampy tamin'ny fanaovana ilay andiany voalohany ho malaza izy, anisan'izany ny rafitry ny ady sy tantara lava be.
Ireo sary dia mitovy amin'ny an'ireo izay hitanao ao amin'ny Final Fantasy IV sy Final Fantasy V, zavatra iray izay tsy isalasalana hahaliana ireo mpankafy lehibe indrindra amin'ny lohateny Retro indrindra io. Fanampin'izay, mahatsapa sy milalao mitovy amin'ny lalao taloha izy amin'ny andiany lehibe. Lafo izany, eny. Fa raha ny fanasoavana azy dia azontsika lazaina fa tsy misy doka izany ary tsy hahita fividianana tsy ampoizina ao anatiny ianao.
Final Fantasy lafiny
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao Final Fantasy tsara indrindra ho an'ny Android
Ny NOMU S10 Pro "tsy simba" amidy mandritra ny andro vitsivitsy